मुला खान जान्नु भयो भने पायल्स लगायत अन्य दर्जन बढी रोग चैट ! « Janaboli
मुला खान जान्नु भयो भने पायल्स लगायत अन्य दर्जन बढी रोग चैट !
काठमाडौं । मुला हरेक नेपालीहरुका लागि सहज तरिकाले उपलब्ध हुने परिकार हो । मुला खानाले धेरै कुराहरुमा फाइदा हुन्छ । यसैं मध्य मुला खानाले पायल्स रोग निको हुन्छ । पाइल्स एउटा यस्तो रोग हो, जसमा शरीरका विशेष हिस्सामा हरेक समय पीडा र जलन महसुस हुने गर्दछ ।
पाइल्सका रोगीका साथ सबैभन्दा ठुलो समस्या यस विषयमा डाक्टरलाई बताउनु हो तर, यो गलत हो । डाक्टरसँग सल्लाह लिएर यसको उपचार गर्नु आवश्यक छ । पाइल्स रोकथामको लागि सबै भन्दा उत्तम विकल्प मुला हो । मुलाको नियमित र सही प्रयोगबाट पाइल्ससम्बन्धी समस्या केही महिनामै समाधान हुने गर्दछ ।
यसबाट पाचन प्रक्रियापनि राम्रो हुन्छ । मुलामा कयौँ यस्ता तत्व पाइन्छ, जुन पाइल्सका भएपछि हुने पीडा कम गर्न सहयोगीसिद्ध हुन्छ । यसका साथै मुलाले चिसो बनाउने काम पनि गर्दछ, जसबाट जलनमा पनि राहत प्राप्त हुन्छ । पाइल्स रोगीले काँचो मुला सेवन गर्नु उपयुक्त मानिएको छ । एजेन्सी
पाल्पामा फेला पर्न थाले यस्ता गम्भीर रोगका बिरामी
काठमाडौं । पाल्पामा डेङ्गुका बिरामी फेला परेका छन् । साउन महीनामा मात्रै दुई बिरामी फेला
याद राख्नुहोस् : ठूलो प्रकोप र महामारी आए आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाका लागि यी २५ अस्पताल पुग्नु
काठमाडौ । सरकारले ठूला प्राकृतिक प्रकोपपछिको आकस्मिक स्वास्थ्य अवस्थालाई व्यवस्थित गर्न २५ मुख्य र ७८
यो संकेत मुटुको कमजोरीको संकेत
काठमाडौ । उमेरभन्दा अगावै कपाल सेतो हुनु मुटु रोगको संकेत हुन सक्छ । अध्ययनअनुसार, उमेरभन्दा
काठमाडौ । पाठेघर महिलाहरुमा हुने एक संवेदनशिल अंग हो । महिलाहरुमा देखिने क्यान्स सबैभन्दा बढी